Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta Hawiye oo bilaabay in ay u kala dhuuntaan Farmaajo iyo Ujeedkooda... - iftineducation.com
Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta Hawiye oo bilaabay in ay u kala dhuuntaan Farmaajo iyo Ujeedkooda…
iftineducation.com – Qabiilada ku abtirsada Beesha Hawiye ayaa durba bilaabay xod xodsaho iyo dadaalo xoogan ay u galayaan sidii ay u heli lahaayeen Xilka Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya oo loo magacaabi doono shaqsi kasoo jeeda Beesha Hawiye.
Xildhibaanada labada Aqal iyo Siyaasiyiinta kasoo jeeda qaar kamid ah qabiilada ku abtirsada Beesha Hawiye ayaa bilaabay in ay u kala dhuuntaan Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Farmaajo si ay uga qal qaalsadaan xilka R/Wasaaraha.
Sida aan Wararka ku heleyno waxaa xalay Farmaajo Hotelka uu degan yahay ugu tagay Xildhibaano iyo Siyaasiyiin kadoo jeeda Beesha Mudulood kuwaa oo Madaxweynaha la qaatay kulan xasaasi ay uga wada hadleen arimo kala duwan.
Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta beesha Mudulood ee la kulmay Madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday in Kursiga Ra’isul Wasaaraha uusan hareer marsiin, waxa ayna is tusiyeen in aysan jirin cid iyaga xiligan kaga xaq badan.
Warar kale oon helnay ayaa sidoo kale sheegaya in Xildhibaano iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda Beesha Habar Gidir iyana la kulmeen Madaxweyne Farmaajo ayna ka codsadeen in uu soo dhaweesto uuna u magacaabo xilka R/Wasaaraha shaqsiga beeshooda kaso jeeda.
Qabiilo kale oo ku abtirsada Beesha Hawiye ayaa iyana qorsheenaya in ay la kulmaan Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si ay dhankooda iyana uga codsadaan xilka R/Wasaaraha iyo xilal kale oo ku aadan dowlada lasoo dhisi doono.
Madaxweyne Farmaajo oon wali xilka si rasmi ah ula wareegin ayaa wada kulamo iyo wadatashiyo uu la qaadanayo Xildhibaano iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda Beesha Hawiye, lamana oga cida uu noqon doono shakhsiga uu Farmaajo usoo xulan doono xilka R/Wasaaraha Soomaaliya.